पिएम कप आजबाट, उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी भिड्ने (खेल तालिका सहित) – Talking Sports
पिएम कप आजबाट, उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी भिड्ने (खेल तालिका सहित)
प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी आजबाट सुरु हुँदैछ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आज प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो । टियु क्रिकेट मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश भिड्ने छन् ।
प्रतियोगिता सात प्रदेश र तीन विभागीय टोली गरेर कुल १० टोलीको सहभागिता रहने छ । १० टोलीलाई दुई समुहमा बिभाजन गरिएको छ ।
समुह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् भने समुह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश २ र सुदुर पश्चिम प्रदेश रहेका छन् ।
पहिलो र दोश्रो दिनको खेल टियु क्रिकेट मैदानमा मात्र खेलाइने छ भने त्यस पछिका समुह चरणका खेलहरु टियु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खेलाइने छ ।
समुह चरणमा पहिलो र दोश्रो स्थान हात पार्ने टोलीले सेमीफाइनलमा स्थान बनाउने छन् । प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ १७ गते खेलाइने छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा नेपाली पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब संयुक्त रुपमा विजेता घोषित भएका थिए । वर्षाका कारण खेल हुन नसक्दा दुबैलाई उपाधि बाँढिएको थियो । त्यस्तै दोश्रो संस्करण एपीएफ र तेश्रो संस्करण नेपाल पुलिस क्लबले जितेका थिए । दोश्रो र तेश्रो संस्करण दुबैमा त्रिभुवन आर्मी क्लब उपविजेतामा सिमित हुन पुगेको थियो ।
बिल्बाओसँग पराजित भएपछि रियल सेमिफाइनलबाट बाहिरियो
रत्नजित, दिपेश, प्रिन्स क्वार्टर–फाइनलमा
रोनाल्डोले बिकानको किर्तीमान नतोडेको चेक फुटबल संघको दाबी
लिभरपुलको एन्फिल्डमा ६८ खेल अपराजित यात्रामा बर्नलीको पानी
महिला लिग: वालिङ बिराटनगर बराबरीमा, एपिएफको जितमा सावित्राको ह्याट्रिक
पुलिसको आक्रमक ब्याटिङ्ग, धमलाको शतक, पवनको किर्तिमानी अद्र्धशतक
तेस्रो डिभिजनको एल्कोयानोसँग रियल म्याड्रिड पराजित
रोनाल्डोको किर्तीमानसँगै युभेन्टसलाई सिजनको पहिलो उपाधि
बिहीबार नापोलीलाई २-० ले हराउदै युभेन्टसलाई सुपर कोपाको उपाधि जित्न मद्धत गरेका क्रिष्चियानो रोनाल्डोले उक्त खेलमा एक गोल गरेका थिए । त्यो एक गोलका कारण ७६० गोल पुर्याएका रोनाल्डोले चेक फुटबलका लेजेण्ड योसेफ बिकान सर्वाधिक गोल गर्ने किर्तीमान पनि तोडेका थिए ।
फुटबलको ईतिहासमै सर्वाधिक गोल गर्ने किर्तीमान बनाएको एक दिन पनि नबितेको अवस्थामा चेक गणतन्त्रको फुटबल संघ फुटबल एसोसिएसन अफ चेक रिपब्लिक(एफएसिआर) ले ट्विट गर्दै रोनाल्डोले बनाएको उक्त किर्तीमान सहि नभएको बताएको छ ।
रोनाल्डोले गरेको ७६० गोल योफेस बिकानको किर्तीमान भन्दा अझै ६१ गोल पछि रहेको बताएको छ । संघले ट्वीट गर्दै लेखेको छ,”फुटबल इतिहासको सर्वश्रेष्ठ गोलकर्ता ? चेक एफएको इतिहास र तथ्यांन्क समितिले महान योसेफ बिकानले गरेको सबै गोल गन्यो र अब हामी आधिकारिक खेलहरूमा उहाँले ८२१ गोल ​​गरेको घोषणा गर्न सक्दछौं।”
चेक फुटबल संघले फिफाले बिकानले दोस्रो डिभिजन खेल्दा गरेको ५३ गोल नगनेको आरोप पनि लगाएको थियो ।
चेक फुटबल संघले दाबी गरेको भिडियो:
६८ खेल,५५ जित,१३ बराबरी र लगभग चार बर्ष पछि, अन्ततः एन्फिल्डको अटुट सपनालाई बर्नलीले तोडिदिएको छ । एन्फिल्डमा गएको चार वर्षमा लिभरपुललाई पराजित गर्ने एक मात्र टोली बर्नाली बन्न पुग्यो । अन्तिम पटक २०१७ मा क्रिस्टल प्यालेसले एन्फिल्डमा जित निकाले पछि एन्फिल्डमा पहिलो पटक जित निकाल्ने टोली बर्नली बनेको हो ।
एशले बार्न्सले पेनाल्टीमा अन्तिम समयमा गोल गरे पछि लिभरपुल निरह देखियो । खेल सकिदा ७ मिनेट बाँकी रहँदा एस्ले बार्नेले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेपछि लिभरपुल बर्नलेसँग १–० ले स्तब्ध बन्न पुग्यो ।
पोजेसनमा जती नै आफ्नो पक्षमा राखे पनि फिनिसिङमा लिभरपुल चुक्न पुग्यो । पहिलो हाफभरी नै लिभरपुलको दवाबलाई निकै आरामले डिफेन्ड गरेको बर्नलीका लागि गोलरक्षक निक पोपले पनि राम्रो भूमिका खेले । ३० औँ मिनेटमा जद्रान शाकिरीको प्रहारलाई बर्नलेका गोलरक्षक पोपेले विफल पारे । ४४ औँ मनेटमा डिभोक ओरिगीको प्रहार क्रसबारमा लाग्दा लिभरपुल अग्रता लिनबाट चुक्यो ।
दोस्रो हाफमा पनि उत्तिकै शान्त देखिएको बर्नलीले बिस्तारै लय समाउदै जाँदा लिभरपुलको डिफेन्स भने खस्किन पुग्यो । ८३ औँ मिनेटमा पेनाल्टी गोलमार्फत खेलमा अग्रता लिन पुग्यो । पेनाल्टी बक्समा बल अघि बढाएका एस्ले बार्न्सलाई सुरुवातमा फाविन्हो र त्यसपछि एलिसन बेकरले पालैपालो फाउल गरेपछि रेफ्रीले बर्नलेलाई पेनाल्टी प्रदान गरेका थिए ।
त्यो पेनाल्टीमा बार्न्स चुकेकन् र लिभरपुलको एन्फिल्डमा ८६ खेल अपराजित रहने सपनामा बर्नलीको आँधीबेरीले विश्व फुटबल जगत नै चकित रह्यो ।
लिभरपुलको १९ खेलबाट ३४ अंक छ । शीर्षस्थानको युनाइटेडको ४० तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको सिटी र लेस्टरको समान ३८ अंक छ । यद्दपि सिटीको हातमा अझै एक खेल बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा यो सिजन लिभरपुल उपाधी होडबाट बहिरिने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: कहाँ गयो एक सिजन अघिको लिभरपुल ?
राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत बिहीबार भएको पहिलो खेलमा एपिएफले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई ६-० गोल पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा भने वालिङ नगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाले १-१ गोलको बराबरी खेलेका छन् ।
सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको एस्ट्रो ट्रफमा भएको पहिलो खेलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई ६-० ले हराउदा । नेपाल राष्ट्रिय महिला टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरेकी थिइन । यस्तै अन्य तीन गोल भने कप्तान अनिता बस्नेत,अन्जली कुमारी योन्जन र प्रिती राईले गरेकी थिइन ।
खेलको पहिलो गोल १४ औँ मिनेटमा सावित्राले गरेकी थिइन । मन्जली योन्जनले दिएको पासमा सावित्राले डिबक्स भित्रबाट सहजै गोल गरिन् ।
२२ औंँ मिनेटमा भने एपिएफले दोस्रो गोल गरेको थियो । यो पटक भने अन्जलीले अनिताले दिएको पासमा गोल गरेकी थिइन् । पहिलो हाफमा २-० को अग्रता लिएको एपिएफले दोस्रो हाफमा चारको गरेको थियो ।
खेलको ६२ औँ मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एपीएफलाई ३-० को अग्रता दिलाईन् । खेलको चौथोँ गोल भने ६४ औं मिनेटमा सावित्राले डिबक्स भित्रबाट मिलाएको बललाई अनिताले गरेकी थिइन । ७२ औँ मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गर्दा एपीएफले ५-० को फराकिलो अग्रता लिएको थियो । पाँचौँ गोल ८९ औं मिनेटमा डेब्यु खेलाडी प्रिती राईले गरेकी थिइन् ।
बिहीबारनै भएको दोस्रो खेलमा वालिङ र बिराटनगरले बराबरी खेल्दा वालिङका लागि सम्झना शर्माले गोल गरेकी थिइन भने बिराटनगरका लागि आशा कुमारीले गरेकी थिइन । खेलको दोस्रो मिनेटमै पाएको अग्रतालाई जोगाउन नसक्दा वालिङ बराबरीमा रोकिन पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय2 hours ago
कप्तान सिद्धान्तको अर्धशतकमा प्रदेश १ को मध्यम योगफल
राष्ट्रिय23 hours ago
एपीएफसँग पराजित हुँदा गण्डकी पिएम कपबाट बाहिर
भिल्ला विरुद्ध सिटीको जित, युनाइटेड शिर्ष स्थानमा पकड बनाउदै
सकियो सन्दिपको दिल्लीसँगको यात्रा